အင်တာနက် porn ၏ Insidious သက်ရောက်မှု။ Rose Laing MD မှထုတ်ဝေသည် (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
နှင်းဆီလိုင်, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 12 အောက်တိုဘာလ 2016 အားဖြင့်
ခမိသားစုဆရာဝန် နှင်းဆီလိုင် ဒါကြောင့်ရောဂါဗေဒ၏သူမ၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းမှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲကိုထည့်သွင်းဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်တွေ့
ကျွန်တော်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက်စဉ်းစားရပါမည်ရောဂါဗေဒ၏စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနေ့ကိုတို့ကပိုရှည်ရဟန်, ဒါပေမယ့်ငါအားအသစ်တဦးတည်းဖြည့်စွက်နေပါတယ် - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များ။
ငါညစ်ညမ်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုသိတယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့သူတစ်ဦးသည်ယခင်ကကြယ်ကျောင်းသား, အွန်လိုင်းတစ်ဝက်ညဉ့်ကိုဖွင့်တည်းခိုခဲ့ကြောငျးမှာကျရှုံးမှစတင်ခဲ့ပါသည်, သူ့၏မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ဆက်စပ်အတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နဲ့အတူများစွာသော months ago ကအကြောင်းစကားပြောခဲ့ရသည်။
ကျနော်တို့ porn, သာမန်လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းအောင်ကြားရှိကွဲပြားခြားနားမှုအဖြစ်အငြင်းအခုံ၏မြေတပြင်လုံး objectification လိုင်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြောင်း, သူသည်ညစ်ညမ်းစဉ်းစားသည်သူ၏မိတ်ဆွေအများဆုံးအရှုံးသမားများအတွက်ခဲ့ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။
မိခင်ကဒီနှင့်အတူအကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်အမှုအရာကိုပြောင်းလဲ, အခုငါ့အသားသည်သူ၏မိတ်ဆွေအများဆုံးမှန်မှန်ရပ်တန့်ဖို့, porn access နှင့်ဆန္ဒ, ဒါမှမဟုတ်ပင်နိုင်ခြင်းခံစားရငါ့ကိုပြောပြတယ်။ သူသည်မဟုတ်ဘဲသတ္တိရှိရှိဖြစ်ပါတယ်ညစ်ညမ်းလူတိုင်းအတွက်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးသူသည်မိမိအအငြင်းအခုံကိုထောကျပံ့ဖို့သုတေသနလုပ်ငန်းအဖြစ်အသုံးပြုတော်မူကြောင်းကိုအွန်လိုင်းငါ့ကိုဆွေးနွေးပွဲပြသခဲ့ပြီးအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကျောင်းကမိန့်ခွန်းလုပ်နေတာ။
ဒီထိပ်တွင်, porn အနည်းငယ်များအတွက်ကြီးမားသောပိုက်ဆံစေသည်သည့်ကြမ်းတမ်းအခြေအနေကိုအသုံးချစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်နေဆဲ, များပြား၏ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။
ဒါဟာကလေးတွေအဘို့ဤမျှလောက်လွယ်ကူသည် (ငါလေးတွေဆိုလိုပြုကြလော့အမေရိကန်လေ့လာမှုများသားသမီးများ၏ရာခိုင်နှုန်း 90 သူတို့အသက်အရွယ် 12 များမှာအချိန်ကာလအားဖြင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြု) လူ့လိင်တစ်ဦးကြမ်းကြမ်းတမ်းပုံပျက်အမြင်သို့သူတို့ကိုငါယူက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်နှိပ်ပါရန်။
သူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ browsing အတွက်များ၏သမိုင်းစစ်ဆေးသူကိုမိဘများကအလွယ်တကူတဲ့သဲလွန်စချန်ထားမက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်အရူးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ "သာမန်" porn ယင်း၏သှေးဆောငျရှုံးအဖြစ် ပို. ပို. fetishist နှင့်အကြမ်းဖက်က်ဘ်ဆိုက်များမှ entry-level porn sites များမှသွားလာရန်ရိုးရှင်းပါသည်။
porn အများအပြားခက်ခဲ-Core မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့တူညီသော dopamine-လွှတ်ပေးရန်ဝင်ရိုးသို့ပုတ်။ အဆိုပါ ပို. ပို. ထူးခြားဆန်းပြားစိတ်လှုပ်ရှားရှာဖွေနေစနစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်အောင်သည်အခြားစှဲ၌ရှိသကဲ့သို့, သည်းခံခြင်းနှင့် salience, ဖွံ့ဖြိုး; မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာတစ် keystroke မှာမရရှိနိုင်ပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ADHD တူသောတင်ပြချက်များနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဘုံဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
တောင်မှစွဲမဟုတ်သောသူတို့၏အဘို့, porn ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်လိင်ပညာရေး tool ကိုအဖြစ်စိတ်ပျက်စရာအခန်းကဏ္ဍသည်။ porn ၏တစ်ခုလုံးကိုအာရုံစိုက်လိင်အင်္ဂါ / orifice အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ porn ကြယ်တို့သည်တညီတညွတ်တည်း, ခြော့နမ်း, အပန်းဖြေသို့မဟုတ်ရယ်မောကြဘူး, ပြဿနာညွှန်ကြားချက်မှ မှလွဲ. မပြောတတ်ကြဘူး။ ဘယ်လိုနွေးထွေးမှုမဆိုကြင်နာဘို့လုလင်တို့သည်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတွေထူထောင်ပစ္စည်း၏ဒီမျိုးစောင့်ကြည့်သလဲ,
ဆရာမိတ်ဆွေတွေကိုဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ထဲသို့ငါ့ကိုဆိုးအစောပိုင်း forays ပေါ်မှာညစ်ညမ်းသက်ရောက်မှုပြောပြပါ။
ငါနေဆဲအတော်လေးလူနာချွတ်ကြောက်မက်ဖွယ်မရှိဘဲယေဘုယျအလေ့အကျင့်အခြေအနေတွင်သို့ဤပြဿနာများ၏အကြှနျုပျ၏အသစ်သောအသိပညာကိုရောက်စေဖို့ဘယ်လောက်ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်သေချာပေါက်ကျနော် (ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်သို့မဟုတ်မပါ) လူငယ်တစ်ဦးနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုသည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူတင်ဆက်သူကိုလူသ , အိပ်မပျော်, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ။
နှင်းဆီလိုင်မှာထံမှပိုပြီးဘလော့ဂ်များ Read www.nzdoctor.co.nz